'Gehenna: Halkee Dhimashadu ku Nooshahay' - Filimka 'Indie Horror Movie' waa Saameyn Wax ku ool ah oo la soo Bandhigay - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Gehenna: Halkee Dhimashadu ku Nooshahay' - Filimka Naxdinta leh ee Indie waa ficillo wax ku ool ah 'Masterpiece'
'Gehenna: Halkee Dhimashadu ku Nooshahay' - Filimka Naxdinta leh ee Indie waa ficillo wax ku ool ah 'Masterpiece'
Waa inaad tan aragtaa! Markii aan dilayay waqtiga ee aan sameynayay duubitaankeyga toddobaadlaha ah ee Kickstarter (KS) waxay indhahaygu isla markiiba ku hakadeen mashruuc la yiraahdo GEHENNA: Meesha Geeridu ku Nooshahay. Waxaa laga yaabaa inuu ahaa muuqaalkii foosha xumaa ee bini-aadamnimada hoos u dhacaya, ama ereyga loo adeegsaday weedhaha furitaanka ee xiisihii ii qabtay, ma hubo. Waxa ii muuqday markii aan iska soo daba dhacay, ayaa ah in tani aysan ahayn mashruucii caadiga ahaa ee KS.
Halkan xafiisyada iHorror.com, baandadu waxay ka doodi doonaan mashaariic cusub oo ay maalgeliyaan dad aad u fara badan maalin kasta. Sababtoo ah xaqiiqda ah in naxdintu ay tahay nooc caan ah oo ka dhex jira wareegyadan iyo ka dib dhammaantood waxay na siinayaan filimo sida Babadook. Nasiib darrose, waxaa jira waxyaabo badan oo dud ah oo ku saabsan beelaha la sheegay oo aan waligood miro dhalin. Laakiin waan aaminsanahay GEHENNA: Meesha Geeridu ku Nooshahay ayaa calaamadi ku yeelan doonta adduunka naxdinta leh. Ragga waaweyn ee warshadaha waaweyn ee aan waligood walwal ka qabin ninka yar waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan kooxdan soo socota ee soo socota ee filim sameeyayaasha ah.
Maskaxda ka dambeysa waxaas oo dhan waa Hiroshi Katagiri (sawirka kore) waana halyeeyga saameynta la taaban karo ee adduunka; isku daridda farshaxan, qurxin, iyo saamaynta caadiga ah shaashadda si aad u hesho "iibiyaha ka badan dhabta" natiijada. Katagiri, isagoo u soo shaqeeyay sidii nin gaar ah oo saameyn ku leh filimada sida Ciyaartii gaajadda iyo Qol ku yaal kaynta (fiiri sawirka kore), iyo xusullada ku xoqidda halyeeyada sida Steven Spielberg, wuxuu si cad u dareemayaa inay tahay waqtigiisii ​​uu ku fariisan lahaa kursiga oo uu tuso asxaabtiisa sida loo qabtay. Isaga iska hubi IMDb halkan.
Akhrinta intaa dheer ee ku saabsan macluumaadka mashruuca ee KS, waxaan ku farxay jawharad kale oo yar. Si cad GEHENNA: Meesha Geeridu ku Nooshahay waa filim cabsi leh oo leh saameyn wax ku ool ah oo weyn - taas oo macnaheedu yahay xayawaanno noocyo kala duwan ah, iyo yaa ku habboon in lagu muujiyo astaamaha noocan oo kale ah? Mid kale maahee Doug Jones! Anigu waxaan ahay qof jecel shaqadiisa Doug hadaadan garanaynin cida aan tilmaamayo, waan ku ceebeynayaa, maxaa yeelay waxaad hubtaa sida cadaabta u arki laheyd noole uu ciyaaray. Wuxuu ku jiraa Lab's Labyrinth, Hellboy, Afar Fantastic, Ragga madow 2, liistaduna way socotaa.
(Sawirka kore waa Mike Elizalde, oo ah milkiilaha Spectral Motion, oo ka shaqeynaya Jones oo ah 'The Old Creepy Old Man', sida Hiroshi uu u muuqdo. Mike iyo Spectral Motion labaduba waxay si buuxda ula socdaan filimka.)
Ugu dambeyntiina, qisada filimkaan ayaa u muuqaneysa mid asal ah, oo aan ku wareegeyn wax aan horey u aragnay Hadaad eegto bogaga taariikh nololeedka Hiroshi, runti wuxuu gacan bir ah ku hayaa waxa sameeya filim wanaagsan iyo sida muhiimka ah waxa cabsi geliya. Isaguna wuu ku cad yahay meesha UMA baahnid caajis xad dhaaf ah iyo edeb daro si aad dadka u cabsi geliso, taa badalkeed, waxaad ku dhex milmaysaa dhagaystayaashaada sheekada adoo adeegsanaya farsamooyin dhaqameed; cabsidu waxay ka imaan doontaa awoodiisa inuu ukeeniyo noloshiisa saameyn la taaban karo, ma ahan kuwa kombuyuutarka
Shakhsiyan, markaan aqriyay macluumaadka bogga Kickstarter aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko waxa laga sameeyay mashruucan. Iyada oo dhowr boqol oo taageerayaal ah durba shaki iigama jiro inay gaari doonto himiladeeda. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqotid Hiroshi iyo abuurka kooxda, dameerkaaga u gudbi Bogga KS oo dib u celi mashruuca. Xitaa waxaad xitaa ka heli kartaa farshaxan madaxaaga ah oo shaqsi ahaan uu u sameeyay Hiroshi laftiisa.
Daniel HegartyDoug JonesGEHENNAHiroshi Katagiri
Jimcaha soo socda 13 wuxuu Hannibal u yahay Nick Antosca Qoraa ahaan
Documentary wuxuu sahmiyaa buugaagta caadiga ah 'Sheekooyinka cabsida leh ee mugdiga looga sheego'